Goobaha lagu sheekeysto ee ugu wanaagsan bulshada si loola hadlo dadka kale | Golaha Moobaylka
Goobaha lagu sheekeysto ee ugu wanaagsan bulshada si loola hadlo dadka kale
Maanta waxaan dhamaanteen u baranay isticmaalka internetka xiriirka bulshada. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo wakhti aan sidaa usii fogeyn sida aan ku qasbanaan jirnay inaan ula xiriirno oo aan ula hadalno dadka kale aad bay uga duwanayd. Shabakadaha bulshada ayaa guuleysta, laakiin kahor intaysan jirin sheekaysiga bulshada Waxay jabsadeen internetka, iyagoo beddelay wax walba.
1 Waa maxay sheeko bulsho?
2 Wadahadalka bulshada ee ugufiican Isbaanishka
2.2 Wadada Wada hadalka
2.3 Wadahadalka Isbaanishka
2.4 Aagga Wadahadalka
3 Waa maxay wada hadalka bulshada ee la doorto?
4 Farqiga u dhexeeya sheekaysiga bulshada iyo farriinta deg dega ah
Waa maxay sheeko bulsho?
Wadahadalka bulshada waa aalad loogu talagalay inay kula sheekaysato shisheeyaha, fikradaha is weydaarsada, hiwaayad wadaag, ganacsi, la kulan dadka, saaxiibo yeela, jacayl hel iyo waxyaabo kale oo badan
Shaqadooda markaa, markay ka soo muuqdeen nolosheena, waa la mid sida ay hadda tahay. Laakiin sidoo kale waa run in dhinacyo badan oo ka mid ah sheekaysiga bulshada ay isbeddeleen. Maanta waxaan u aragnaa inay ku heli karaan luqad kasta, iyadoo baahi loo qabo in la isdiiwaangaliyo ama in kale, bilaash iyo lacag bixin, iwm. Wadahadalka bulshada, oo ka fog inuu u dhinto hooska Warbaahinta Bulshada sida dadka qaar saadaaliyeen, wali waxtar badan ayey leeyihiin oo caan ka ah adduunka oo dhan.
Oo hadday weli nool yihiin, waa sabab aan la inkiri karin: sheekaysiga bulshada ayaa na siiya fursado badan oo xiiso leh oo aan kula falgalno. Sidoo kale waa run in dhammaantood waxaa xukuma xeerar aad u cad in dhammaan isticmaaleyaashu ay ixtiraamaan, taas oo aan had iyo jeer sahlaneyn. Sharciga dahabiga ah ee loo adeegsado kanaalladaan oo sida ugu fiican looga soo baxo ayaa ah in lagu dhaqmo waqti walba waxbarasho, xushmad iyo masuuliyad.
Waa taas, sifiican loo isticmaalay, sheekaysiga bulshada ayaa nolosheena ku hodanayn kara waxyaabo badan oo wanaagsan. Tusaale ahaan, waxay na siinayaan fursad aan kula xiriirno kooxaha dadyowga jinsiyadaha kala geddisan ah, la xiriirno dad leh hiwaayado ama dhadhan la mid ah, ama si fudud u helno waqti sheeko xiiso leh.
Wadahadalka bulshada ee ugufiican Isbaanishka
Kuwani waa sheekooyinka bulshada ugu muhiimsan ee hadda jira. Xulashadayada waxaan dooranay toddobada degel ee ugu muhiimsan waqtigan xaadirka ah xagga sumcadda iyo tirada isticmaaleyaasha:
In kasta oo aan waxbadan laga aqoon Isbaanishka, Canalchat wuxuu ku naaloodaa caan weyn wadamada Latin Amerika
Wadahadal caan ah oo Latin America ka badan kan Isbaanishka, inkasta oo ay si isa soo taraysa u adeegsadaan dadka ku hadla Afka Isbaanishka ee Yurub. KanalChat Waxay leedahay qolal kala duwan oo ay u kala saareen dano iyo dalal. Thanks to nidaamkeeda tab, waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasheeda inay ku wada sheekaystaan ​​qolal dhowr ah isla waqti isku mid ah.
Waxaa laga yaabaa in qaabka ugu fiican ee sheekadan ay tahay isku xirkeeda, mid fudud oo aad u macquul ah. Intaa waxaa dheer, gabi ahaanba waa bilaash umana baahna diiwaangelin.
Wadada Wada hadalka
Chat Avenue, waa mid ka mid ah sheekooyinka bulshada lagu hadal qaado ee Ingiriisiga ah
Wadada Wada hadalka Waa qayb ka mid ah kooxda la xushay ee sheekooyinka bulshada ee taariikhiga ah ee shabakadda. Sannado ayaa ka soo wareegay welina waa mid caan ah, oo si fiican u ilaalinaysa nuxurka asalka ah. Waa sheeko qoraal aad u fudud oo toos ah. Dabcan, waxay ku qoran tahay Ingiriis, laakiin waxaan u maleynay inay cadaalad tahay in lagu daro liiskeena maxaa yeelay ficil ahaan waxaa adeegsada dad badan oo Isbaanish ku hadla.
Ku xigta magaca isticmaale kasta waxaa jira calan yar oo tilmaamaya dhalashadiisa. Faahfaahintaas yar ee "astaanta guryaha" ah isma beddelin tan iyo maalmihii hore ee sheekadan. Dhinaca kale, isdhexgalkeeda ayaa dib loo habeeyay maantana waxay leedahay muuqaal casri ah.
Link: Wadada Wada hadalka
La hadal Hispano, oo ah nin weyn oo ka mid ah sheekooyinka bulshada ee Isbaanishka
Mid ka mid ah sheekaysiga bulshada ee ugu caansan Spain iyo dalal kale oo badan oo ku yaal Ameerika, oo ay ku jiraan Mareykanka, halkaasoo boqolkiiba dadka ku hadla Isbaanishku ay sii kordhayaan.
Abka Wadahadalka Isbaanishka waxaa si buuxda loogu habeeyay taleefannada gacanta waxay leeyihiin isku xirnaanta Facebook iyo Twitter, iyo waxyaabo kale. Waxay kaloo bixisaa ikhtiyaarka "Dadka u dhow" si ay ula kulanto dad ka socda isku xaafad, magaalo ama magaalo.
Waxay ka kooban tahay qolal lagu sheekeysto oo badan oo ka mid ah mowduucyada ugu kala duwan. Diiwaangelintu waa bilaash, in kasta oo haddii aad rabto inaad sheekaysato adigoon u adkaysan dhibaatada ka haysata xayeysiinta duullaanka ah, waa inaad marin u hesho nooca lacagta lagu bixiyo.
Si aad u sheekaysatid, dadka ula kulanto, wax u barato oo u baashaaliso: Aagga Wada-hadalka
Firfircoon ilaa 2007, Aagga Wadahadalka Waa mid ka mid ah sheekaysiga bulshada ee Isbaanishka oo taariikh badan leh. Waa madal aad u ammaan badan oo sahlan in la isticmaalo oo ay adeegsadaan malaayiin isticmaale bishiiba. Diiwaangelintu waa lacag la’aan.
Waxay leedahay qolal lagu sheekeysto oo lagu abaabulay afar qaybood kuwa ugu waaweyn: «Spain», oo ay ku jiraan qolalka lagu sheekeysto oo ay ku tilmaameen bulshooyinka ismaamula iyo xitaa magaalooyinka; "Latinos", oo ah qayb ka kooban qolal gaar ah mid kasta oo ka mid ah dalalka Latin Amerika; «Waqtiga firaaqada» (saaxiibtinimada, dhaqanka, isboortiga, cayaaraha ...) iyo «Xiriirka».
En Wadahadal waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada qolalka wixii ku saabsan welwel kasta iyo xaalad kasta oo aad yeelan karto: qolalka shukaansiga, qolalka loogu talagalay dadka ka weyn 40, qolalka looga hadlayo arrimaha hadda jira ... sidoo kale wadan iyo xitaa gobol.
Haddii aan ka hadalno caannimadiisa, waxaa kuugu filan in la yiraahdo tani waa tan ugu sarreysa ee lagu qiimeeyo Isbaanishka qiimeynta Alexa. Tani wax yar maaha. Intaas waxaa sii dheer, macno malahan meesha aad ka xirmayso ama qolka aad gasho: halkan waxaad had iyo jeer ka heli doontaa qof aad la sheekaysato. Intaas waxaa sii dheer, waa sheeko fudud oo kaliya na weydiineysa naaneysta oo xulo avatar aad gasho. Dhibaatooyin la'aan.
In kasta oo xoogaa laga duugoobay, El Chat wali wuxuu leeyahay taageerayaal badan
Tani waa mid ka mid ah sheekooyinka bulshada ee taariikhiga ah ee ku guuleystey inay noolaadaan oo ay la qabsadaan isbeddellada si la yaab leh, in kasta oo caannimadoodu aysan sidii hore ahayn. Xagga bilicdeeda ... Sikastaba, waxaan dhihi karnaa waxay noqotay xoogaa duug ah. Sheekada Waxay hadda siisaa laba nooc isticmaaleyaasheeda: sheekadooda caadiga ah ee kanaalka IRC iyo sheeko cusub oo qaab HTML ah.
Haddii aan rabno inaan adeegsanno sheekada IRC-da caadiga ah waa inaan Java rakibnaa oo aan adeegsanno aaladda loo yaqaan 'SeaMonkey'. Si kastaba ha noqotee, ku dhowaad cidina ma isticmaasho qaabkan mar dambe. Ku dhowaad qof kastaa wuxuu doorbidaa nooca cusub ee si fudud loogu heli karo naanaysta diiwaangelin la'aan si uu ugu sheekaysan karo qolalka kala duwan.
Halyeey kale oo ku sheekeysta shabaqa. Caannimadoodu waxay ku jirtaa fudeydkeeda. Waa ku filan tahay inaad soo bandhigto naanaysta ama naanaysta oo aad ku bilowdo inaad ku sheekaysato mid ka mid ah qolalkeeda badan. Sidaad horeba u maleysay, terrachat Isagu waa dhaxal sugaha hore ee Terra, Rafaa bilowgii qarnigii XNUMXaad ee dadka isticmaala da 'gaar ah ay si fiican u ogaan doonaan
Qolalka lagu sheekeysto ee degelkan ayaa aad u tiro badan, in kastoo qaarkood ay ka booqashooyin badan yihiin kuwa kale ee isticmaala. Qolalka waaweyn badanaa had iyo jeer way buuxaan, halka kuwa kalena macno ahaan faaruq yihiin. Markaad gelineyso iyaga, shabakadu waxay xaqiijineysaa inaan keligeen nala dhaafi doonin oo si toos ah ayey noogu hagaajin doonaan qolalka ugu mashquulka badan.
Waa maxay wada hadalka bulshada ee la doorto?
Waa maxay su’aal! Jawaabtu waa mid aad u dhib badan, maaddaama mid kasta oo ka mid ah wada-hadallada bulsheed ay leeyihiin waxyaabo u gaar ah oo ay bixiyaan fursado kala duwan. Dhammaantood aad ayey isugu egyihiin midba midka kale, laakiin isla markaa waxay bixiyaan khibrado gaar ah oo kala duwan.
Doorashada sheekada ugu fiican waa arrin shaqsiyeed. Kuwa ugu caqliga badan isku day Kuwaas oo dhan oo aan kugula talinay liistada qaybtii hore oo aan doorano mid ama kabadan. Cad acual iyadoo loo eegayo dookhaaga, danahaaga iyo ujeedooyinkaaga.
Sidoo kale waa ku habboon tahay inaad xasuusato inay mudan tahay inaad isweydiiso su'aalaha qaar ka hor intaadan gelin mid ama in ka badan oo ka mid ah sheekaysigan bulshada. Maxaan runtii ka raadineynaa noocyada noocan ah? Waa inaan qiimeynaa wax kasta oo goobahan kulan ay ku kordhin karaan nolosheena shaqsiyadeed. Tusaale ahaan, adoo adeegsanaya sheekaysiga bulshada waad awoodi kartaa ku noolow khibrado gaar ah oo aan laga sheekeyn karin: sameyso saaxiibtinimo adag waxaadna heshaa jaceylka noloshaada, ama madadaalo iyo madadaalo uunbaa. Dadka khaaska ah xishoodka leh, ee leh nolol yar oo bulsheed ama ku jira daqiiqado cidlo weyn, sheekaysiga bulshada ayaa ah wax intaas ka sii badan. Waxay noqon karaan beeyo, duco.
Farqiga u dhexeeya sheekaysiga bulshada iyo farriinta deg dega ah
Erayada "wada sheekeysi" iyo "fariin deg deg ah" inta badan waa la wareeray. Tani waa wax macquul ah, maxaa yeelay inkasta oo ay dhab ahaantii yihiin laba qaab oo kala duwan oo loogu wada xiriiro internetka, haddana xuduudaha u dhexeeya labaduba si aad ah ayey u xumaadeen sanadihii la soo dhaafay.
Si adag u hadlaya, codsiyada fariimaha degdega ah waxaa loogu talagalay wadahadal shaqsiyeed qof kale oo aad horey u taqaanay, sababtoo ah si aad sidaas u yeelatid waa inuu adeegsadehu horey ula xiriiro. Wadahadalka dhinaca kale waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay madal dijitaal ah halkaas oo dhowr qof ay isku xiriiraan si ay uga wada hadlaan danaha guud, wadaagaan sawirrada, iwm. Isku ekaanshaha sheekaysiga waxaa badanaa loo isticmaalaa qol ay martidu galaan, ku sheekaystaan, ku wada hadlaan, ku baashaalaan oo ay ka baxaan. Qol ay lagama maarmaan tahay in la ogaado sida loo dhaqmo loona ilaaliyo akhlaaqda., Dabcan
Waa run in codsiyada farriinta degdegga ah ay isbeddeleen, iyagoo helay qaar ka mid ah astaamaha caadiga ah ee lagu sheekeysto (sida laga arki karo kooxaha Whatsapp o telegraam, tusaale ahaan). Sababtaas awgeed ayaa badanaa loogu daraa isla qaybta sheekaysiga bulshada. Laakiin maya, isku mid ma ahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Goobaha lagu sheekeysto ee ugu wanaagsan bulshada si loola hadlo dadka kale
Sida looga soo kabsado farriimaha tooska ah ee la tirtiray ee Instagram
Jawaabaha Yahoo Ayaa Xidhan: 8 Beddelka Ugu Fiican